စီးပွားရေးအတွက် Pinterest ၏ ၁၀ ချက် Martech Zone
စီးပွားရေးအတွက် Pinterest ၏ ၁၀ ချက်
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 14, 2012 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2017 Douglas Karr
Pinterest သည် Martech အတွက်အဓိကလမ်းကြောင်းအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ဆင့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Infographics ဘုတ်အဖွဲ့။ ငါကအခြားသူတွေလို Pinterest မှာအချိန်အများကြီးမဖြုန်းပေမယ့်အဲဒါဘာကြောင့်အရမ်းကောင်းတာလဲ ၎င်းသည်အမြင်အာရုံဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးကြည့်ရှုရန်လွယ်ကူသည်။ သင်သည်လက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့်အချက်အလက်များစွာကို scroll လုပ်နိုင်သည်။
Pinterest ကဲ့သို့သော ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဝင်ရောက်သောအခါမျှော်လင့်ချက်များသည်စားသုံးသူနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းထက်များစွာကွဲပြားသည်။ အကယ်၍ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် Pinterest ကိုအသွားအလာမောင်းနှင်ရန်မောင်းနှင်စေလိုပါက၊ ကြီးစွာသောဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ပြီးစကားစမြည်ဆက်သွားရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ Angie ၏စာရင်း, Pinterest အပေါ်အံ့သြဖွယ်ရှိနေခြင်းရှိပါတယ် ... ကနေအရာအားလုံးအပေါ်အကြောင်းအရာပို့စ်တင် ဂန္ထဝင်ကားများ သို့ Windows နှင့်တံခါးများ.
လူမှုရေးအရခွဲခြားထားသည့်အရာနှင့် Mookoo ဒီဇိုင်းသည်ဒီသတင်းအချက်အလက်ကို The စီးပွားရေးအတွက် Pinterest အသုံးပြုခြင်း၏ပညတ်တော် ၁၀ ချက်သင်၏လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာတွင် Pinterest ကိုအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးသောအလေ့အကျင့်များနှင့်အကြံဥာဏ်များအားဖြင့်သင့်ကိုလမ်းပြပေးသည်။ အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်တစ် ဦး အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည် မေီပေါ်တာရဲ့ဘလော့ဂ်ကနေ post.
Tags: Pinterestစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Pinterest
ဂူဂဲလ် Analytics မှလူမှုရေးအစီရင်ခံခြင်း
ဇွန်လ 15 ရက် 2012 ခုနှစ် နံနက်6နာရီ 49 မိနစ်
ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် pinterest ကိုသုံးခဲ့ပြီး ရလဒ်ကောင်းသည်၊ ၎င်းသည် စာမျက်နှာ7မှ နံပါတ်5သို့2ပတ်မပြည့်မီအချိန်အတွင်း ခုန်တက်သွားသည်။
သော့ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို လူများစွာက ပင်ထိုးပြီး ပြန်တင်ရပါမည်၊ အခက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ pinterest အသုံးပြုသူအများစုသည် ကျွန်ုပ်တို့ပင်ထိုးထားသည့်အရာနှင့်မတူပါက ၎င်းတို့သည် ပြန်လည်စတင်ခြင်းမပြုပါ။
ကျွန်တော် ရိုးရှင်းသော အရာတစ်ခုကို fiverr တွင် outsource လုပ်ကာ လူ 75 ယောက်ဖြင့် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကို pinterest လို့ရိုက်ပြီး fifrr မှာ ရှာကြည့်ရုံနဲ့ သူဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိတော့လို့ TOP မှာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အခြားရောင်းချသူအများအပြားသည် ငါးrr တွင် pinterest ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအရ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို SEO တွင် တိုးမြင့်အောင် မလုပ်နိုင်ကြပေ။ ဘာကြောင့်လဲတော့ မသိဘူး။
pinterest သည် SEO အတွက် ကောင်းမွန်သည့် အကြောင်းရင်းများ-
1. SEO တွင် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ် တိုးလာစေရန် သင့် pins များ၏ link များကို ping ရန်လိုအပ်သည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ပင်ထိုးပြီးသည်နှင့် ၎င်းတွင် backlink အရေအတွက်များရှိသည်။
3. Pinterest သည် anchor text (url link မှလွဲ၍) မပံ့ပိုးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သော့ချက်စာလုံးများကို ဖော်ပြချက်တွင် ထည့်သွင်းရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံဆဲဖြစ်သည်။